भिनिसियसको गोलमा हारबाट बच्यो रियल मड्रिड
नेपाल लाइभ मंगलबार, फागुन १८, २०७७, ०८:१०
काठमाडौं– डिफेन्डिङ च्याम्पियन रियल मड्रिडले स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा बराबरी खेलेको छ। रियल सोसिडाडले रियल मड्रिडलाई १–१ गोलको बराबरीमा रोकेको हो।
घरेलु टिम रियल मड्रिडविरुद्ध उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै रियल सोसिडाडले बराबरी खेलेको हो। रियल सोसिडाडका लागि पोर्टुले गोल गरे। रियल मड्रिडका लागि भिनिसियस युनियरले गोल गरे। रियल सोसिडाडले आफ्नो अग्रता जोगाउन नसक्दा बराबरी खेल्न पुग्यो। पहिलो हाफसम्म गोलरहित बराबरी खेलेको रियल मड्रिडले खेलको ५५ औं मिनेटमा गोल खाएको थियो। पोर्टुले गोल गर्दै रियल सोसिडाडलाई १–० को अग्रता दिलाए। तर ८९ औं मिनेटमा भिनिसियसले गोल गर्दै रियल मड्रिडलाई १–१ गोलको बराबरी दिलाए।
बराबरीसँगै रियल मड्रिडले लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लिने मौका गुमाएको छ। तेस्रो स्थानमा रहेको रियल मड्रिडको २५ खेलबाट ५३ अंक छ। रियल सोसिडाडको भने २५ खेलबाट ४२ अंक छ। लिगको शीर्ष स्थानमा रहेको एथ्लेटिको मड्रिडको २४ खेलबाट ५८ अंक छ। दोस्रो स्थानको बार्सिलोनाको २५ खेलबाट ५३ अंक छ।
कुशलको अर्धशतकीय इनिङ्समा नेपालकाे लगातार दाेस्राे जित
माधव नेपाल अर्काको पतिका लागि सती गइरहेका छन् : ओली
संविधान रक्षाका लागि पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण : नेता सिंह
जोसे माउरिन्हो टोटनह्यामकाे प्रशिक्षकबाट बर्खास्त इंग्लिस कल्ब टोटनह्यामले प्रशिक्षण जोसे माउरिन्होलाई बर्खास्त गरेकाे छ। प्रीमियर लिग क्लबले यूरोपियन सुपर लिगमा भाग जनाउने घोषणा गरे... सोमबार, वैशाख ६, २०७८
स्पेनिस ला लिगा : उपाधि यात्रामा रहेकाे एट्लेटिकोको फराकिलो जित, रियल बराबरीमा राेकियाे स्पेनिस ला लिगा फुटबलअन्तर्गत आइतबार राति भएको खेलमा शीर्षस्थानको एट्लेटिकोले जित निकाल्दै उपाधि यात्रा बलियाे बनाएकाे छ। घरेलु मैदा... सोमबार, वैशाख ६, २०७८
हालान्डको दुई गोलमा डर्टमन्डकाे पुनरागमन जित जर्मन बुन्डेसलिगाअन्तर्गत आइतबार राति भएको खेलमा बोरुसिया डर्टमन्डले पुनरागमन जित निकालेको छ। घरेलु मैदान सिग्नल इडुना पार्कमा भएकाे... सोमबार, वैशाख ६, २०७८
कुशलको अर्धशतकीय इनिङ्समा नेपालकाे लगातार दाेस्राे जित सोमबार, वैशाख ६, २०७८
देशका विभिन्न ठाउँबाट ७ जना नक्कली डाक्टर पक्राउ सोमबार, वैशाख ६, २०७८
माधव नेपाल अर्काको पतिका लागि सती गइरहेका छन् : ओली सोमबार, वैशाख ६, २०७८
संविधान रक्षाका लागि पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण : नेता सिंह सोमबार, वैशाख ६, २०७८
जोसे माउरिन्हो टोटनह्यामकाे प्रशिक्षकबाट बर्खास्त सोमबार, वैशाख ६, २०७८
सटकट खबर [२०७८ बैशाख ४] शनिबार, वैशाख ४, २०७८
नेपाल लाइभ समाचार [भिडियो] शनिबार, वैशाख ४, २०७८
संसद् अधिवेशन अन्त्य र सहरी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सोमबार, वैशाख ६, २०७८
बहुमतका लागि १ सांसद नपुग्दा लुम्बिनीमा अविश्वासको प्रस्ताव अड्कियो आइतबार, वैशाख ५, २०७८
माधव नेपालनिकट नेता रिजाल ओली समूहको बैठकमा सहभागी सोमबार, वैशाख ६, २०७८
एमाले अनुशासन आयोगले ओलीलाई भन्यो- फागुन २८ गतेको निर्णय फिर्ता लिनुस् आइतबार, वैशाख ५, २०७८
प्रधानमन्त्री ओलीको शृंखलाबद्ध प्रहार, सभामुख सापकोटाको प्रतिकात्मक जवाफ आइतबार, वैशाख ५, २०७८
आइलिग मेरा लागि नसोचेको सपना जस्तै : प्रकाश बुढाथोकी (अन्तर्वार्ता) नेपाल लाइभ
प्रश्न अझै छ, भलिबल नै खेलिरहने? : अरुणा शाही [अन्तर्वार्ता] नेपाल लाइभ
धुर्मुससँग वार्ता : ‘मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ’ सराेज तामाङ
खेलाडीको सम्मान कि पत्रकारको कमाइ? ऋग्वेद शर्मा
खेलकै पर्खाइले अप्ठ्यारोमा खेलकुद ऋग्वेद शर्मा
बोलिरहेकै छन् गणेश थापा नेपाल लाइभ
जर्मन फुटबल, योआखिम लो र एन्जेला मर्केल ऋग्वेद शर्मा
काेराेना कहर भुल्दै झुम्मिए क्रिकेटप्रेमी (तस्बिरहरु) शनिबार, वैशाख ४, २०७८
फुटबलका नयाँ प्रशिक्षक : नेपाललाई अवसर कि अर्को प्रयोग मात्र? सोमबार, चैत २३, २०७७
नेपाल भर्सेस् बंगलादेश : बराबरीमा सकियो पहिलो हाफ [तस्बिरहरू] शनिबार, चैत १४, २०७७
बैकिङ कसुरको चेक अनादर मुद्दामा अब मिलापत्र हुने मंगलबार, चैत ३१, २०७७